तपाईंको राशी साइनको अनुसार तपाईंको भाग्यशाली धातु के हो? यहाँ जान्नुहोस् - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ज्योतिष
तपाईंको राशी साइनको अनुसार तपाईंको भाग्यशाली धातु के हो? यहाँ जान्नुहोस्
चलचित्रहरू गुढी पाडवा २०२१: माधुरी दीक्षितले आफ्नो परिवारसँगै शुभ महोत्सव मनाउने कुरा सम्झिन्
घर ज्योतिष राशि चिह्न राशि चिह्न ओआई-सैदा फराह नूर द्वारा सैदा फराह नूर मे १,, २०१। मा राशिफल साइन अनुसार भाग्यशाली धातु यी धातुहरूले २०१ luck मा तपाईंको भाग्य उज्यालो पार्नेछन्। बोल्डस्की
ज्योतिष अनुसार, तपाईंको राशि अनुसार साइन्स लगाउने धातुले तपाईंलाई आफ्नो भाग्य परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ। यो विश्वास गरिन्छ कि धातुले प्रभाव पार्न वा तपाईंको भाग्यको रेखा परिवर्तन गर्न सक्दछ।
वैदिक ज्योतिषमा, यो कुरा पत्ता लगाइयो कि धातुहरूले हाम्रो राशि चक्रसँग सम्बन्धित ग्रहहरूलाई प्रभाव पार्न ठूलो प्रभाव पार्दछ। हाम्रो राशि या सूर्य चिन्हको आधारमा धातु छनौट गर्दा यी ग्रहहरूको प्रतिकूल प्रभावबाट बच्दछ।
यस बाहेक, सहि धातु छनौट गर्नु तपाईंको शरीर र दिमागका लागि पनि लाभदायक छ। तपाईको राशि चिन्हमा आधारित उत्तम धातुहरू के हुन् भनेर जाँच गर्नुहोस्।
मेष: मार्च २१ - अप्रिल १ th
मेष एक शक्तिशाली र शक्तिशाली संकेत हो। यी व्यक्तिहरू आफूले गरेका सबै कुरामा अग्रगामीहरू हुन जान्छन्। उनीहरूको गहनाको छनौटको साथ उनीहरूले पनि प्रभाव पार्छन्। तिनीहरूको उच्च उर्जा र उत्साह तिनीहरूको गहनाको छनौटमा प्रतिबिम्बित हुन्छ र रातो पूर्ण रूपमा तिनीहरूको रंग हो। तिनीहरूले रुबी सेट सिल्वर र रातो एनामेल लगाउनु पर्छ।
वृषभ: अप्रिल २०- मे २०
यी व्यक्तिहरू प्रायः प्रकृतिमा व्यावहारिक हुन्छन् र अर्कोतर्फ, तिनीहरू स्वार्थी हुन्छन् र जीवनमा भौतिकवादी चीजहरूमा संलग्न हुन्छन्। तिनीहरू जहिले पनि ट्रेंडी ज्वेलरीका लागि छनौट गर्छन् र उनीहरूको टीम क्लासिक आईटमहरूको साथ प्रायः जसो समय लिन्छन्। तिनीहरू प्रकृतिमा कट्टरपन्थी हुन् र यसैले तिनीहरू नाजुक गहनाबाट बोल्ड गर्न सक्छन्। यो पृथ्वी चिह्नको रूपमा, तिनीहरूले पहेंलो रंगमा विशेष गरी पुखराज वा एम्बरमा ढु stones्गा लगाउनु पर्छ। गहनाका लागि उत्तम धातु सुन, चाँदी वा तामामा सेट गर्न सकिन्छ।
के हामी घरमा नटराज मूर्ति राख्न सक्छौं?
यदि तपाइँ यी चीजहरू देख्नुहुन्छ भाग्य तपाइँको पक्षमा हुनेछ!
मिथुन: मे २१ - जून २०
यी व्यक्तिहरूको एक जीवन्त र जीवन्त व्यक्तित्व छ। नाजुक गहनाको लागि छनौट गर्नु यस राशि साइनिको व्यक्तिहरूको लागि उत्तम विकल्प हो। यो चिन्ह नीलम र चाँदी र स्टील बाट बने सबै गहना द्वारा प्रभावित छ। यस बाहेक, बैजनी यस चिन्हको लागि भाग्यशाली रंग हो, त्यसैले तिनीहरू चाँदीमा खोपिएको नीलम ढु stone्गाको विकल्प लिन सक्छन्।
क्यान्सर: जून २१-जुलाई २२
यी व्यक्तिहरू सामान्यतया चीजहरू र भावनाहरूसँग टाँसिरहन्छन् र वास्तवमा तिनीहरूलाई कहिले जान दिदैनन्। यस राशि चिन्हका लागि उत्तम धातुहरू चाँदीका साथ पन्ना र चाँदनी पेंडन्ट र रिंगहरू हुन्। यी बहुमूल्य धातुहरू र ढु stones्गा पूर्ण रूपमा उनीहरूको संवेदनशील भावनात्मक प्रकृतिसँग मेल खान्छन्।
सिंह: जुलाई २rd rd अगस्ट २rd
तिनीहरूसँग सबै राशि चिन्हहरूको बीचमा सब भन्दा शक्तिशाली पात्रहरू छन्। ज्वलंत धातुहरू यो संकेतका लागि उत्तम उपयुक्त हुन्छन्। यी व्यक्तिहरू बोल्ड स्टेटमेन्ट पीसहरू वा ठु .्गाहरूका लागि जहिले पनि जान्छन्। उत्तम चिन्हहरू जुन यो स suit्केतको अनुरूप छ तामा र एम्बर ब्रेसलेटहरू। यस बाहेक, सुन यस चिन्हको लागि ठूलो थप हो।
के तपाईको अगाडि दुई गाँठो भाग्य भाग्यशाली छ?
कन्या: अगस्त २ Aug सेप्टेम्बर २rd
तिनीहरू प्रकृतिमा सावधानी अपनाउँछन् र जीवनमा प्राय: सबै चीजहरूको प्रत्येक विवरण याद गर्दछन्। तिनीहरू गहिरो शक्ति ज्वेलरीका लागि कहिले पनि अप्ट इन गर्छन् वा अति सूक्ष्म स्वाद हुँदैन। तिनीहरू प्रकृतिमा कट्टरपन्थी हुन् र यस राशि चिन्हको अनुसार उत्तम धातुहरू मोती मोती र गाढा चाँदीको बहुमूल्य वा अर्ध-बहुमूल्य पत्थरहरू मिलेर बनेका छन्, जुन यो चिन्हका लागि उत्तम विकल्पहरू हुन्।
तुला: २ 23 सेप्टेम्बर - अक्टुबर २– तारिख
तिनीहरू भोका छन् र सजिलैसँग अरुबाट प्रभावित हुन्छन्। तिनीहरूलाई थाहा छ उनीहरूमा के राम्रो देखिन्छ र असम्भव गहनाहरू छान्नुहोस्। पुखराज, एम्बर र एक्वामरिनले यस चिन्हलाई बल दिन्छ। जब यी ढु stones्गाहरू चाँदीसँग मिल्दछन्, यी रत्नहरूले तराजूमा पक्कै सन्तुलन ल्याउँदछन्।
वृश्चिक: अक्टुबर २rd देखि नोभेम्बर २२
तिनीहरू बहु-पक्षीय छन् र दुनियाबाट आफ्ना वास्तविक भावनाहरू लुकाउँछन्। तिनीहरू सामान्यतया आफ्नै कोकुन मा छन् र शायद अरुलाई आफ्नो वास्तविक आत्म देखाउने। कोरल र रूबी सबै भन्दा राम्रो ढु stones्गा हुन् र भाग्यशाली धातु चाँदी हो यो चिन्हको लागि।
धनु: नोभेम्बर २२ डिसेम्बर २२ डिसेम्बर
यो संकेत हो जुन नीलो चाहिन्छ। तिनीहरू ग्लोबेट्रोटरहरू हुन्। तिनीहरूले नीलमणि र फ़िरोज़ा वा निलो पुखराजको लागि छनौट गर्नुपर्नेछ जुन यस चिन्हलाई राम्रोसँग मिल्नेछ। यस संकेतको लागि भाग्यशाली धातु सुन हो।
सोया सॉस स्वास्थ्य को लागी राम्रो छ
यी Th चीजहरू तपाईंको जेबमा राम्रो भाग्यका लागि राख्नुहोस्
मकर: डिसेम्बर २rd जनवरी २० जनवरी
एक तल-पृथ्वी प्रकृति भएका व्यक्तिहरूको साथ यो अर्को पार्थिव संकेत हो। यी व्यक्तिहरू केही हदसम्म स्वभावको हुन्छन्। तिनीहरूसँग जीवनको लागि समझदार दृष्टिकोण छ, त्यसैले तिनीहरू गहनालाई सम्पत्तिको रूपमा लिन्छन्। कालो मोतीहरू तिनीहरूको डोमेन हुन् र यी व्यक्तिको लागि उत्तम धातु चाँदी हो।
कुम्भ: जनवरी २० से फेब्रुअरी १th
तिनीहरू मूल हुन् र चीजहरू आविष्कार गर्न मन पराउँछन्। जेवेलहरू जो नीलमणि र पीरोजाबाट बनेका हुन्छन् सरल डिजाइनको साथ र चाँदी वा यूरेनियमको सूटसँग मिसाइन्छ यो राशिले उत्तम चिन्हमा चिन्ह लगाउँछ। यी चिन्हका लागि भाग्यशाली संयोजनहरूको रूपमा यसले काम गर्दछ।
मीन: फेब्रुअरी १th - मार्च २०
यी व्यक्तिहरू पानीको रंगहरू मन पराउँछन्। तिनीहरू निःस्वार्थ र अस्वस्थ छन् तर पनि मौका दिएमा सजीलै नेतृत्व गरिन्छ। भाग्य मोर्चामा, निलो र चाँदी, नीलम र गाढा निलो मा रत्नहरूले यस राशि चिन्ह व्यक्तिको सम्भाव्यतालाई साँच्चै अनलक गर्न सक्दछन्।
किन मेरो केटी साथी छैन?
हिन्दीमा महिला भ्रूणहत्याको बारेमा नारा
के एक प्रेमीले उसकी प्रेमिकाबाट सुन्न चाहन्छ
कालो घेरा समीक्षा को लागी बदाम तेल
पृथ्वीको खानेहरु को साइड इफेक्टहरु